कसरी सम्भव भयो अस्ट्रेलियामा कोरोना नियन्त्रण ? – Panchakoshi Daily
। २०७७ जेष्ठ २०, मंगलवार मा प्रकाशित
हाल अष्ट्रेलियामा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)का संक्रमित निको हुने दर उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ भने नयाँ संक्रमित देखिने दर पनि घटेको छ ।
ष्ट्रेलियामा कोरोना महामारीको सुरुआतदेखि यो समाचार तयार पार्दासम्म संक्रमितहरुको संख्या कूल सात हजार १९५ रहेको छ, जसमध्ये ६ हजार ६१६ जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् । हालसम्म अष्ट्रेलियामा यो महामारीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या १०३ छ ।
चीनसँग छ वास्तविक सूर्यभन्दा १० गुणा शक्तिशाली सूर्य !
भारतमा ४४ दिन यताकै सबैभन्दा कम सङ्क्रमित
नेपाललाई १० लाख डोज खोप अनुदानमा उपलव्ध गराउने चीनको घोषणा
भारतमा सलह प्रकोपको सम्भावना, नेपालमा के छ पूर्वतयारी?